ရာမို့စ်ဟာ နောက်ခံလူတွေထဲမှာ ဘယ်သူမှ မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ စံချိန် ရယူခဲ့ပါပြီ
လာလီဂါ သမိုင်းဝင် စံချိန်မှတ်တမ်းတစ်ခုကို ရယူခဲ့တဲ့ ရာမို့စ် Ramos
27 Aug 2018 . 5:31 PM
ရီးယဲလ်အသင်းခေါင်းဆောင် နောက်ခံလူ ရာမို့စ် Ramos ဟာ လာလီဂါပြိုင်ပွဲရဲ့ သမိုင်းဝင် စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်း တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ရာမို့စ်ဟာ ဟီရိုနာအသင်းကို (၄-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ လာလီဂါပွဲမှာ ရီးယဲလ်အသင်းအတွက် ပထမဂိုးကို ပယ်နယ်တီကနေ “ပါနန်ကာ ကန်ချက်Panenka-style”ကန်ချက်နဲ့ သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ရာမို့စ်ဟာ လာလီဂါမှာ (၁၅)ရာသီဆက် ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး နောက်တန်းလူအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ရာမို့စ်ဟာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလက ဆိုစီဒက်နဲ့ပွဲမှာ လာလီဂါကစားသမားဘ၀ ပထမဆုံးဂိုးကို Free Kick ကနေ သွင်းယူခဲ့ပြီး အဲဒီတုန်းက သူဟာ ဆီဗီလာအသင်းမှာ ကစားနေတာပါ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ရီးယဲလ်အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မာလာဂါနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ရီးယဲလ်အသင်းအတွက် ပထမဆုံးဂိုးကို သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကတည်းက စလို့ ရာမို့ဟာ လာလီဂါရာသီတိုင်း ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် (၁၅)ရာသီဆက်အထိ ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ ရာမို့စ်အတွက် နောက်ထပ်ပစ်မှတ်ကတော့ Outfield Player (ဂိုးသမားမှ လွဲပြီး ကျန်တဲ့ကစားသမားများကို ဆိုလို)ထဲမှာ လာလီဂါရာသီဆက် ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့ ဘီလ်ဘာအို ကစားသမားဟောင်း Gaínza ရဲ့ စံချိန်ကို အမီလိုက်နိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Gaínza ဟာ ၁၉၄၀ ကနေ ၁၉၅၉ ခုနှစ်အထိ (၁၉)ရာသီဆက် ဂိုးသွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရာမို့စ်အနေနဲ့ အဲဒီစံချိန်ကို အမီလိုက်နိုင်ဖို့ဆိုရင် နောက်ထပ်(၄)ရာသီအတွင်း ဂိုးတွေ သွင်းယူနိုင်ဖို့ လိုနေပါပြီ။ အသက်(၃၂)နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ရာမို့စ် Gaínza ရဲ့ စံချိန်နဲ့ တူညီနိုင်မလားဆိုတာကတော့ . . . . .
Photo:Reuters,These Football Times
လာလီဂါ သမိုငျးဝငျ စံခြိနျမှတျတမျးတဈခုကို ရယူခဲ့တဲ့ ရာမို့ဈ Ramos
ရီးယဲလျအသငျးခေါငျးဆောငျ နောကျခံလူ ရာမို့ဈ Ramos ဟာ လာလီဂါပွိုငျပှဲရဲ့ သမိုငျးဝငျ စံခြိနျမှတျတမျးကောငျး တဈခုကို ပိုငျဆိုငျခဲ့ပါပွီ။ ရာမို့ဈဟာ ဟီရိုနာအသငျးကို (၄-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တဲ့ လာလီဂါပှဲမှာ ရီးယဲလျအသငျးအတှကျ ပထမဂိုးကို ပယျနယျတီကနေ “ပါနနျကာ ကနျခကျြPanenka-style”ကနျခကျြနဲ့ သှငျးယူခဲ့ပါတယျ။ အခုဆိုရငျ ရာမို့ဈဟာ လာလီဂါမှာ (၁၅)ရာသီဆကျ ဂိုးသှငျးနိုငျခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး နောကျတနျးလူအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။
ရာမို့ဈဟာ ၂၀၀၄ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလက ဆိုစီဒကျနဲ့ပှဲမှာ လာလီဂါကစားသမားဘ၀ ပထမဆုံးဂိုးကို Free Kick ကနေ သှငျးယူခဲ့ပွီး အဲဒီတုနျးက သူဟာ ဆီဗီလာအသငျးမှာ ကစားနတောပါ။ အဲဒီနောကျမှာတော့ ရီးယဲလျအသငျးဆီ ပွောငျးရှခေဲ့ပွီး ၂၀၀၅ ဒီဇငျဘာလအတှငျး မာလာဂါနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ရီးယဲလျအသငျးအတှကျ ပထမဆုံးဂိုးကို သှငျးယူခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီကတညျးက စလို့ ရာမို့ဟာ လာလီဂါရာသီတိုငျး ဂိုးသှငျးနိုငျခဲ့ပွီး အခုဆိုရငျ (၁၅)ရာသီဆကျအထိ ရှိလာခဲ့ပါပွီ။ ရာမို့ဈအတှကျ နောကျထပျပဈမှတျကတော့ Outfield Player (ဂိုးသမားမှ လှဲပွီး ကနျြတဲ့ကစားသမားမြားကို ဆိုလို)ထဲမှာ လာလီဂါရာသီဆကျ ဂိုးသှငျးယူခဲ့တဲ့ ဘီလျဘာအို ကစားသမားဟောငျး Gaínza ရဲ့ စံခြိနျကို အမီလိုကျနိုငျဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
Gaínza ဟာ ၁၉၄၀ ကနေ ၁၉၅၉ ခုနှဈအထိ (၁၉)ရာသီဆကျ ဂိုးသှငျးခဲ့တာဖွဈပွီး ရာမို့ဈအနနေဲ့ အဲဒီစံခြိနျကို အမီလိုကျနိုငျဖို့ဆိုရငျ နောကျထပျ(၄)ရာသီအတှငျး ဂိုးတှေ သှငျးယူနိုငျဖို့ လိုနပေါပွီ။ အသကျ(၃၂)နှဈအရှယျရှိနပွေီဖွဈတဲ့ ရာမို့ဈ Gaínza ရဲ့ စံခြိနျနဲ့ တူညီနိုငျမလားဆိုတာကတော့ . . . . .